UKUBUKEZA I-CASINO MIDAS YE-INTHANETHI NEYESELULA
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-casino midas
Isibuyekezo se-Casino Midas
Ibhonasi Lokukwamukela:Ize ifike R30,000 Ibhonasi
I-Casino Midas yikhasino ye-inthanethi entsha esebenzisa i-Real Time Gaming ukunikeza abadlali imidlalo abangayidlala. Ngemuva kokusungulwa ngo-2016, isikhule eminyakeni embalwa edlule. Ibukeka kahle mayelana nokuhlelwa kwesayithi futhi lidonsa ukunakekela kwabadlali uma livula. Kunohlu oluhle lwemidlalo kanye namaphromoshini ukuklomela abadlali abakhetha ukuwasebenzisa.
Abadlali ababhalisa e-Casino Midas bayakwazi ukufinyelela izici zengxoxo ebukhoma yamahora angu-24 ngosuku. Ngakho-ke, noma yiziphi izinkinga eziqhamukayo ngesikhathi abadlali bedlala, zingaxazululwa ngokushesha. Lokhu kuhle ukubona ngoba amanye amakhasino anikeza usizo lwamakhasimende ngamahora okusebenza ebhizinisini noma abanaso isici sengxoxo ebukhoma.
AMABHONASI OKUKWAMUKELA KA-2020 E-CASINO MIDAS
Ikhodi yebhonasi lokuqala MIDASGOLD Abadlali bathola U-100% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R6000 kudiphozithi lokuqala kanye nezikhathi ezingu-100 zokudlala mahhala
Ikhodi yebhonasi lesibili MIDASGOLD2 Abadlali bathola U-125% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R6000 kudiphozithi lesibili
Ikhodi yebhonasi lesithathu MIDASGOLD3 Abadlali bathola U-150% webhonasi elinganayo lize lifike ku-R6000 kudiphozithi lesithathu
AMAKHODI KA-2020 EBHONASI YEDIPHOZITHI ENGEKHO E-CASINO MIDAS
Ngeshwa, okwamanje awekho amakhodi ebhonasi yediphozithi engekho atholakala kubadlali e-Casino Midas. Kodwa ungakhathazeki, ngaphandle Kwebhonasi Lokukwamukela elimangazayo, le khasino inokunye okuniningi ekunikezayo! Bheka nje esigabeni esilandelayo:
AMANYE AMAPHROMOSHINI AKHETHEKILE ANIKEZWA YI-CASINO MIDAS
Game of the Month Inyanga ngayinye i-Casino Midas ikhetha umdlalo ozoklomela abadlali kathathu inani Lamaphoyinti atusayo
Majestic Monday Njalo ngoMsombuluko, abadlali bathola u-100% webhonasi yokudiphozitha imali kanye nezikhathi zokudlala mahhala ezingu-40. Le bhonasi ingasetshenziswa kabili ngoMsombuluko ngamunye.
Wednesday insurance Njalo ngoLwesithathu thola u-20% wediphozithi lakho kumidlalo obheje khona wangawini.
The King’s Friday Feast Thola ibhonasi elinganayo ka-75% nezikhathi zokudlala mahhala ezingu-25 ngosuku ngalunye ezinsukwini ezintathu ezilandelayo.
INDELA YOKUNGENA NGEMVUME NOKUBHALISA KU-INTHANETHI E-CASINO MIDAS
Kuyinto elula kakhula ukungena ngemvume e-Casino Midas. Kulula ukubona inkinobho yokungena ngemvume ekhoneni eliphezulu kwesokudla kuwebhusayithi. Ihlala ikhona noma ungaphequlula ikhasi, ngakho-ke ihlala ikhanya. Uma usuchofoze inkinobho, ikhasi lokungena ngemvume lizovela, bese ufaka igama lakho lokungena kanye nephasiwedi. Uma usukwenzile lokho, uzobe usungene ngemvume futhi ukulungele ukudlala e-Casino Midas.
Nakho ukubhalisa e-Casino Midas kulula kakhulu. Inkinobho yokujoyina iseceleni kwenkinobho yokungena ngemvume, futhi nayo ihlala ikhona ngaphezulu kwesikrini ngazo zonke izikhathi. Uma usuchofoze inkinobho, uzohanjiswa ekhasini lokubhalisa. Lapha kufanele ufake imininingwane yonke ulandele imiyalelo ekuskrini. Uma ukwenzile lokho, uzobe usubhalisele i-akhawunti e-Casino Midas futhi usukulungele ukudlala.
IMIDLALO YEKHASINO ONGAYIDLALA KU-INTHANETHI E-CASINO MIDAS
I-Casino Midas inikeza abadlali izinhlobohlobo eziningi zemishini yokugembula yevidiyo. Ngenxa yokuthi isebenzisa uhlelo lwe-Real Time Gaming kusho ukuthi kunzezinhlobo ezehlukile zemidlalo engadlalwa. Konke kusukela kwenama-reel amathathu kuya kwayisithupha, kanye nolayini okhokha aze afike kumakhulu. Kusho ukuthi uhlu lwethu luhamba phambili embonini.
Eminye imishini yokugembula yevidiyo enikezwa yi-Casino Midas ibandakanya i-Trigger Happy, iNaughty or Nice 3 kanye ne-Mr Money. Ngaphezulu kwemishini yokugembula yevidiyo engadlalwa, miningi imishini yokuwina isizumbulu semali esikhula njalo etholakalayo. Elinye lamagama amakhulu ongalithola lapha yi-Megasaur.
Uhlu lwemidlalo yetafula ongayikhetha aluthembisi kangako njengolwemishini yokugembula yevidiyo. Kunemidlalo engu-10 kuphela etholakala kubadlali, okusho ukuthi ayimningi imidlalo. Kunohlobo olwehlukile olulodwa lweningi lemidlalo yetafula, nakuba ungathola i-roulette kanye ne-blackjack. Okunye okwenza imidlalo ingathakazelisi wukuthi ayikho imidlalo enomdayisi obukhoma etholakalayo. Kubalandeli bemidlalo yetafula, i-Casino Midas ikude ngemuva kwamanye amakhasino kumakhethe.
Kulezi nsuku iningi lamakhasino e-inthanethi anesigaba se-poker yevidiyo, futhi i-Casino Midas ayihlukile. Uhlu lwemidlalo ongayikhetha lulungile kodwa alumangazi. Kunemidlalo eyisishiyagalombili ohlukile we-poker yevidiyo otholakalayo futhi kunamagama amakhulu njenge- Jacks or Better, i-Joker Poker kanye ne-Deuces Wild.
I-CASINO MIDAS IQHATHANISEKA KANJANI KUSELULA?
Uma kuziwa ekudlaleni kuselula e-Casino Midas, inikeza abasebenzisi isipiliyoni esibushelezi. Isayithi lihlelwe kahle, ngakho-ke livmela ukuthi abasebenzisa iningi lamadivayisi eselula bajabulele ukudlala ngokushesha. Akukho ukunwebeka okubi kokubonwayo; ukunciphisa kwenziwe kahle. Futhi kulula ukuliphequlula isayithi ngoba iningi lendlela elihlelwe ngalo liyafana nesayithi yekhompyutha. Impela kwenza ukudlala uhamba kube yinto elula.
Ikhono lokusebenzisa amadivayisi e-Apple noma e- Android ukudlala e-Casino Midas ngelinye iphoyinti elihle. Kusho ukuthi amadivayisi amabili athandwa ngabantu kumakethe angasetshenziswa ukuvula isayithi yesiphequluli seselula. Okwamanje ayikho i-app yeselula etholakalayo, kodwa isiphequluli seselula sisebenza kuze kungabi nesidingo se-app.
NGINGAKWAZI UKUDAWUNILODA I-MIDAS ESELULENI YAMI?
Abadlali abakwazi ukudawuniloda isofthiwe eyengeziwe ukuze benze iwebhsayithi lisebenze ngokushesha uma besebenzisa i- Casino Midas.
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUKHIPHA IMALI E-CASINO MIDAS
Visa/Mastercard Yebo/Cha Izinsuku zokusebenza ezingu-3–10
Easy EFT Cha Lapho uyikhipha
IZINDLELA EZIVUNYELWE ZOKUDIPHOZITHA IMALI E-CASINO MIDAS
EasyEFT Yebo Lapho uyikhipha
Bitcoin Yebo Lapho uyikhipha
INKAMPANE YE-CASINO MIDAS NEMINININGWANE YOKUXHUMANA
IMINININGWANE EJWAYELEKILE YE-CASINO MIDAS
USIZO LWAMAKHASIMENDE E-CASINO MIDAS
Isungulwe: 2016 SA Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: Ayikho
Umphathi ngu: Luckland Group B.V I-imeyili: [email protected]
ABANTU ASEBAKE BAWINA IKHASINO NOMKLOMELO E-CASINO MIDAS
Ingabe uyazibuza uma kukhona abantu abanenhlanhla asebake bawina kamuva e-Casino Midas? Impendulo nguyebo! Nalu uhlu lwabantu abasanda kuwina lapha e-Casino Midas kanye nemiklomelo yabo:
Saul S: R2,796
Desmond J: R415
Sophia W: R2,370
UBUHLE NOBUBI BE-CASINO MIDAS
Kunohlu oluhle lwemishini yokugembula yevidiyo anikezwa yi-Real Time Gaming
Kunezindlela zokubhenka eziningi ezitholaka kubadlali lapha
Imishini yokuwina isizumbulu semali esikhula njalo inikeza imiklomelo emihle
Imbalwa imidlalo yetafula ongayikhetha, futhi ayikho imidlalo yekhasino ebukhoma
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali ziyabiza kakhulu
Ingabe i-Casino Midas isemthethweni eNingizimu Afrika?
Uhulumeni wase-Curacao unikeza i-Casino Midas ilayisense, ngakhokhe kuphephile kubadlali baseNingizimu Afrika.
Ngiyikhipha kanjani imali ku-Casino Midas?
Ukukhipha imali e-Casino Midas kudingeka ukuthi uye ekhasini likakheshiya. Uma ulapho, ungakhetha inani ofuna ukulikhipha, futhi uma lelo nani likhona, ungakhetha indlela yokukhiha imali bese licubungula ukuyikhipha.
Yini i-Casino Midas?
I-Casino Midas yikhasino yeinthanethi entsha emakethini. Izama ukunikeza abadlali uhlu olukhulu lwemidlalo ehlanganiswe namaphromoshini amahle. Konke lokhu kwenzelwa ukukunikeza isipiliyoni esimnandi sokusebenzisa ikhasino ye-inthanethi.
Ubani umnikazi we-Casino Midas?
I-Luckland Group B.V ngumnikaze we-Casino Midas futhi iyiphethe.
Ingabe i-Casino Midas inezici zokubheja ezemidlalo?
I-Casino Midas ayinazo izici zokubheja ezemidlalo ezitholakala kubadlali.
Ingabe i-Casino Midas inikela ngohlelo lwabantu ababaluleke kakhulu (VIP)?
Abadlali bayakwazi ukufinyelela uhlelo lwe-VIP e-Casino Midas. Lubandakanya ukuqoqa amaphoyinti atusayo, ongawashintshanisa ngemiklomelo.
Ziyini izidingo zokubheja e-Casino Midas ukuze ukhiphe imali?
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali e-Casino Midas zithi kudingeka ukuthi ubheje ibhonasi lakho izikhathi ezingu-50 Lokhu kusho ukuthi uma ibhonasi belingu-R100, kuzomele ubheje uze ufike ku-R5,000 ukuze ukwazi ukukhipha imali yakho.